ကတိကဝတ်5စနစ်:
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ခရက်ဒစ်ရပ်တည်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုသတိရှိရှိအားဖြည့်သည်။ စားသုံးသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးနှင့်စီးပွားရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအပြုအမူများကိုစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊
2. ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိရန်။ ထုတ်ကုန်မှတ်တမ်းများတည်ဆောက်ရန်နှင့်လူမှုရေးအသိအမြင်နှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်။
ဖောက်သည်ပြန်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသည်ပုံမှန်ဖောက်သည်များပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းစစ်တမ်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်၊ ဖောက်သည်၏မှတ်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုစုဆောင်းပြီးဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုဖိုင်များကိုတည်ဆောက်သည်။ ပြproblemsနာများကိုတွေ့ရှိပါကအချိန်မီဖြေရှင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာရောင်း ၀ ယ်ရေး ၀ န်ထမ်းများအားလေးလေးနက်နက်ပြင်ဆင်ပေးပါ။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချသည်၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရောင်းအားဆော့ (ဖ်) ဝဲအားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အားအသုံးပြုသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးချမှတ်ပြီး၊ ကိုင်တွယ်ခြင်း၏ ဦး ဆောင်မှုယန္တရားကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးတာ ၀ န်ယူခြင်း။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင်ပါ ၀ င်သောဌာနအားလုံးသည်ဖိုင်တွဲရမည်ကိုအထူးသတိပြုပါ။ အခြေအနေနှင့်ပြanalysisနာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အလားတူပြtheနာများထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမှရှောင်ရှားရန်တာ ၀ န်များကိုရှင်းလင်းစွာခွဲဝေပါ။
တစ် ဦး ဝယ်ယူရေးတာဝန်ခံမှုစနစ်တည်ထောင်ပါ
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အရည်အသွေးကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေးစနစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကိုပေးသွင်းသူများထံဆက်သွယ်ပြီးရင်းမြစ်မှထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်းများကိုငြင်းဆန်ရန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းမှု၊ ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းယန္တရားကိုသတ်မှတ်သည်။ ဌာနတစ်ခုစီသည် ၄ ​​င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်သည်၊ ပြinspectionနာအားမိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းများပြုလုပ်သည်။